China Nordic Modern Solid Wood Living Room Abụọ-Agba TV Guzosie Cabinet # 0020 rụpụta na Factory | Yamazonhome
Nordic Modern Solid Wood Living Room Abụọ-Agba TV Guzosie Cabinet # 0020
Aha: TV Guzosie
Nọmba nlereanya: Amac-0020
Nha: 1800 * 350 * 430mm
Ebe kwesịrị ekwesị: ime ụlọ, Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ, Ọmụmụ ihe
Osisi siri ike na-acha agba agba agba agba anọ
Aha: Tebụl n'akụkụ
Mfe na oge a siri ike TV TV kabinet
Na ileba anya mbu, akwa ocha TV a di mfe ma mara mma. Ejiri lacquered dị ọcha jikọtara ya na osisi siri ike anọ gbara gburugburu, na-adị mfe ịdọrọ ma ọ gaghị akpata nhụjuanya na-enweghị isi. Otu ihe osise eserese na calligraphy na desktọọpụ, ite nke ahịhịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-agbakwunye ọtụtụ ihe dị mkpa na ike na ụlọ ọrụ TV.
Obi ike na mechie siri ike osisi kabinet ụkwụ
Dika ihe omumu sayensi nke ulo oru TV, ogwe osisi ndi ozo, ezi uche di nma, na ime ka ha di ala, mee ka ikike ha sie ike, sie ike ma kwụsie ike, belata njikọ kọntaktị na ala, belata esemokwu esemokwu, ma mee ọ dịịrị gị mfe ịkwaga, ịkwanye ma dọpụta Chere. Belata nguzogide, zere mkpọtụ siri ike, ma gbatịkwuo ọrụ ya.
Button drawer njikwa imewe
Ejiri mara osisi na nke dị mfe iji rụọ ya bụ osisi siri ike, nke siri ike ma sie ike. Banye na jiri nwayọ dọrọ drawer ahụ, na-echekwa oge na mbọ. Ejiri bọtịnụ gbara ọchịchịrị jikọta ya na lacquer ọcha dị mfe ma dị ọcha, na-egosipụta ụdị mma dị iche. Gbochie ịchụso ejiji ejiji.
Ọdịdị siri ike azụ azụ
Ọdịdị ahụ siri ike dị n'azụ nwere ike belata ihe ize ndụ nke ihe na drọwa anaghị abanye n'ime ya, si otú ahụ na-ebute ihe ize ndụ nke ịda. Azụ mechiri emechi dị mfe ma dị mma, ewepụghị ma dịkwa mma, enwere ike ịgbakwunye ya na mgbidi iji gbochie ihe ịda.
High ohere ọnụego ohere imewe
Nnukwu igbe anọ nwere ikike dị elu, kewara nke ọma, nwere ike inyere gị aka ịchekwa ihe dị iche iche. Ọdịdị nke osisi osisi slide siri ike na-eme ka ịdị nwayọ dị n'etiti ndị na-ese ihe, ọ naghị ewepụtakwa mkpọtụ dị ka ihe nkiri slide ma dị mfe nchara. Okporo osisi slide siri ike na-ebelata mmebi nke osisi ma nwee ike ịgbatị ndụ ọrụ nke ụlọ ọrụ TV.
Elu àgwà ọcha oak TV kabinet
Mere nke ọcha oak si North America, dị ọcha siri ike osisi na-adịghị laminated, ma ọ bụ na ọ bụ ọnụ ala roba osisi. Ogo nke osisi agafeela nyocha dị oke mma, yabụ ị nwere ike zuru ike. Mkpụrụ osisi ahụ doro anya ma bụrụ ihe okike, a na-ahazi ọka dị mma n'usoro n'usoro, mara mma ma dị mfe, ụdị ahụ siri ike ma dịgide, aka na-adịkwa mma ma dịkwa mma. Ọ bụ osisi magburu onwe ya maka ịme arịa ụlọ dị elu.
Nke gara aga: 2020 ọhụrụ guzoro SUP sọfụfụ mmiri egwuregwu akụrụngwa 0364
Osote: Nordic minimalist white oak siri ike osisi obere ulo TV Guzosie kabinet # 0021
Cammack akpọlitere agba Deluxe Wood oke oyi akwa ...
Ngwongwo Bed Bed ohuru a na-eme nri 0223
Nordic ìhè okomoko Pu erimeri oche mkpakorita ...
Nordic style flannel oche nkecha minimalist f ...
Amazon New rabbit Breeding House Nchekwa Pet Ca ...
Nordic siri ike osisi erimeri table mmiri ara ehi tii shop re ...